Fanavotana - Wikipedia
Ny fanavotana dia famonjena entin' Andriamanitra ho an' ny olombelona. Ny teny nadika amin' ny teny malagasy hoe "fanavotana" dia teny ampisaina amin' ny raharaham-pitsarana izay ilazana ny zavatra atao mba hividianana ny fisitrahana zo. Ny teny nadika hoe "fanavotana", izay midika hoe "fividianana indray", dia fomba fiteny ara-teôlôjia ao amin' ny fivavanhana kristiana, izay manantitra ny endriky ny zava-miafin' ny famonjena ny olombelona. Avotan' Andriamanitra amin' ny ratsy sy ny fahotana ny olombelona mba hahanomezany azy indray fahafahana. Voavonjy ny olombelona satria navotan' Andriamanitra.
Ny fanavotana araka ny Testamenta TalohaHanova
Miresaka ny amin' ny fanavotana ny Baiboly ka maneho izany indrindra ho zavatra tanterahin' ny olona hividianana (hanavotana) ny fanananana na ny fahafahan' ny havany.
Ny "fanavotana" olona very fahafahana, toy ny olona voafonja sy ny andevo ary ny olona bokan-trosa, dia fanaon' ny olona andavanandro sady fantatry ny vahoaka maro tamin' ny Andro Taloha, isan' izany ny vahoakan' i Israely. Ny "zo fanavotana" (hebreo: גְּאוּלָּה / Gueulah) dia zo omena ny mpivarotra tany tao Israely fahiny, araka ny hita ao amin' ny Bokin' ny Levitika (Lev. 25. 23-25) ary koa omena izay mpisitraka ny fameloma-maso. Ao amin' ny Bokin' i Rota dia miresaka ny amin' i Boaza izay nanavotra an' i Rota, izay vehivavy maty vady, tamin' ny alalan' ny fanambadiany azy sy ny niterahany zaza lahy atao hoe Obeda taminy.
Ny Bokin' i Jôba (Jôba 19.25) dia milaza fa any amin' ny andro farany no hahatanterahan' ny fanavotana hataon' i Iahveh.
Manorina ny fanambaràn-tenany miandalana amin' io fanaon' ny olombelona io Andriamanitra ka miseho amin' ny maha Andriamanitra mpanafaka azy, araka ny Bokin' ny Eksodosy, tsy hanavotra olona iray ihany, fa firenena iray manontolo avy amin' ny fangejana sy ny fanandevozana tany Egipta (Jereo ny Hiran' i Mosesy ao amin' ny Eks. 15.1-21, sy ny lahatsoratra hafa mitovy votoatiny aminy). Izany no niaingan' ny fifandraisana manokana teo amin' i Iahveh amin' i Israely tonga "vahoakany".
Izany zavatra izany dia miverina sady mihalalina tao amin' ny fahababoana tany Babilôna. Ao amin' ny Bokin' i Isaia na Bokin' i Izaia (Isaia 41. 14) dia i Iahveh na Jehovah no lazaina fa afaka miantoka ny fanavotana. Araka ny voasoratra ao amin' ny Bokin' i Isaia (Isaia 41.14; 44.24; 54.8) dia tsy mahatoky tamin' ny Andriamaniny ny vahoanan' i Israely nefa Andriamanitra be fitiavana dia mahatoky mandrakizay tsy misy fetra. Nanavotra ny vahoakany avy tamin' ny fahababoana tany Babilôna Andriamanitra ka nampanantena fa hiverina any amin' ny Tany nampanantenaina izy ireo.
Ny fanavotana araka ny Testamenta VaovaoHanova
Ny kristianisma, izay mino ny fanavotana hotanteraka any amin' ny fotoana ho avy dia mihevitra fa ny fahafoizan' i Jesoa Kristy ny ainy ho famelana ny fahotan' ny zanak' olombelona, araka ny Evanjelin'i Matio (Mat. 26.28) dia fanavotana feno izay efa voasoratra tamin' ny andro taloha. I Paoly anefa, araka ny Epistily ho an' ny Rômana (Rôm. 3.24), dia mampitovy ny fanavotana amin' ny fahasoavana omen' Andriamanitra ny olombelona amin' izao ankehitriny izao.
Feno tanteraka tamin' ny fotoana lasa amin' ny alalan' ny fahatongavana ho nofo sy amin' izao ankehitriny izao amin' ny alalan' ny fahasoavana ary amin' ny fotoana hoavy amin' ny alalan' ny fiavian' i Kristy fanindroany (na parosia) ny fanavotana ka zava-miafina fototra fahatelo iorenan' ny finoana kristiana; ny zava-miafina fototra roa hafa dia ny Trinite sy ny fahatongavana ho nofo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanavotana&oldid=1010392"
Dernière modification le 28 Martsa 2021, à 08:46
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 08:46 ity pejy ity.